Travel. – Thet Nandar
Oversea Trip Plan
ဒယ်ဒီ …. ပစ္စည်းတွေက တစ်ယောက်ကို ပေါင် ၅၀ (၂) ထုပ်၊ ပေါင် ၁၀၀ ဆိုတော့ မာမီတို့ သားအမိ ၃ယောက်ပေါင်း ပေါင် ၃၀၀ ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခု သေတ္တာတွေ မရွှေ့ နေတာနဲ့ပဲ မာမီ တစ်ခု လန့်တာကလေ။ နယူးယောက်ကို မာမီတို့ ရောက်လာတဲ့အခါ ဒယ်ဒီ bag gate နားကို အထဲဝင်လို့ ရရင် ကောင်းမယ်။ ၀င်လို့ ရမယ်တော့ မထင်ဘူး။ မာမီတို့က bag တွေကို ရွှေးပီးသွားရင် custom ကို ဖြတ်ရအုံးမှာ။ အဲဒီမှာ သွားတန်းစီရအုံးမယ်။ trolly က အိတ် အလွန်ဆုံး ၃ လုံး ၄ လုံးလောက်ပဲ […]
Read More Oversea Trip Plan